Miyey Madaxweyne Mustafe iyo Axmed Shide diidi karayeen xisbiga cusub? - Jigjiga Online
HomeSomalidaMiyey Madaxweyne Mustafe iyo Axmed Shide diidi karayeen xisbiga cusub?
Miyey Madaxweyne Mustafe iyo Axmed Shide diidi karayeen xisbiga cusub?
JigjigaOnline Editorial Board
Xisbiga Dimuquraadiga Soomaalida ayaa Sabtidii si rasmi ah u dhamaystiray inuu ku biiro xisbiga Barwaaqada ee PP ee uu Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed, kaas oo Soomaalida iyo qowmiyadaha dalka siinaya fursado ay kaga muuqdaan miiska talada dalka lagu goynayo, sidoo kalena ay kusoo bandhigi karayaan aragtidooda siyaasadeed iyadoo codkooduna muhiim yahay oo la dhegaysanayo.
Ka hor Sabtidii oo uu qabsoomay shirweynaha xibsiga XDS oo hannaanka kubiirista dhamaystirayey, waxa soo qabsoomay laba shir oo kale oo ay guddida fulinta iyo golaha dhexe ee xisbigu kusoo go’aamiyeen qodobbadii lagu ansixiyey shirweynaha, hase yeeshee masuuliyiinta Dawladda Deegaanka iyo xisbiga XDS ayaan shacabka deegaanka la wadaagin macluumaad qancin karaya oo ay ku tusinayaan waxyaabaha ka baxsan afka baarkiisa ee xaqiiqada ah ee uu xambaarsan yahay xisbiga lagu biirayo.
Madaxweyne Mustafe oo bilowgii hore ahaa shaqsi si weyn ugu ololaynayey xisbiga cusub ee Barwaaqada, kana hadlay warbaahinta Itoobiya ee luuqadda Axmaariga ku hadasha, ayaa ka gaabsaday inuu si waafi ah uga kaafiyo bulshada Soomaaliyeed qorsheyaasha xisbiga cusub iyo haddii uu horseedayo burburinta nidaamka federaalka ah ee dalka ka jira.
Sidaas oo kale, Guddoomiyaha xisbiga Dimuquraadiga Soomaalida, Axmed Shide oo ah wasiirka Maaliyadda ee Itoobiya, ahna gacan-yare uu ku kalsoon yahay Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed ayaa sidii looga bartay afka ka xidhay shacabka uu metelayo.
Inkasta oo marka horeba aanay doorasho shacab ku imanin Madaxweyne Mustafe iyo Axmed Shide oo xukuumadda Abiy Ahmed ay soo xulatay, haddana waxay shacabka Soomaaliyeed ka filayeen in ay rabitaankooda ku shaqeeyaan oo aanay dheg u dhigin waxyaabaha looga yeedhinayo Addis Ababa iyo ninka shaqada siiyey ee Abiy Ahmed, taas oo ah inay qanciyaan bulshadooda ka hor inta aanay qorshaha Ra’iisal wasaaraha ka hirgelinin deegaanka.
Inkasta oo illaa hadda aanay muuqanin khatar dhab ah oo uu xisbiga Barwaaqadu ku yahay bulshada Soomaaliyeed, haddana waxa jira shaki laga soo xawilay Melle iyo deegaanka Tigray oo si cad u diiday ku biirista xisbigan. Sidaas oo kale, siyaasiyiin waaweyn oo qaarkood ay isku dhow yihiin Abiy Ahmed ayaa si aan gabbasho lahayn fagaareyaasha ula yimid dabinno iyo siro qarsoon oo dalka halis ku ah oo uu horseedayo xisbigu.
Sida laga dhadhansaday waraysi uu bixiyey Jamaal Diiriye oo ah Lataliyaha Madaxweyne Mustafe, waxa jiray dareen laga qabay Addis Ababa oo ahaa in Madaxweyne Mustafe oo markii hore la dhacsanaa xisbiga cusub uu markii dambe ogaaday waxyaabo hore uga qarsoonaa, kaddibna uu dib uga istaagay, taasina keentay in si toos ah loogu hanjabo.
Jamaal Diiriye waxa uu sheegay in sida macallin iyo arday oo kale ay tahay xaaladda deegaanku oo xukuumadda Abiy Ahmed ay u yeedhiso madaxda DDS waxa ay doonayso, taas oo caddaynaysa inay ku qasban yihiin in wax kasta oo lasoo faro ay fuliyaan.
Saluugga uu Mustafe qabay oo laga dareemayey aamusnaantiisii iyo in masuuliyiintiisa oo dhan ay afka xidheen oo xattaa telefishanka deegaanka ee SRTV uu joojiyey tebinta wararka la xidhiidha arrintan, ayaa kale oo muuqatay in ismaan-dhaaf uu u dhexeeyey Axmed Shide oo si toos ah u fulinayey awaamiirta Abiy Ahmed iyo Mustafe.
Mustafe oo dhinacna ay shacabka Soomaalidu canaan badan u jeedinayeen, dhinacna buurta sare culays badan laga saarayey, ayaa waxa uu noqday dheriga labada dhinac ka gubanayey oo saddex arrimood oo kali ahi la gudboon yihiin.
Midda koowaad, waxa ahayd in sida uu haddaba yeelay uu aqbalo ku-biirista xisbiga Barwaaqada oo shuruudaha ay hor-dhigeen ee la aqbalay ay ku qancaan.
Midda labaad, waxay ahayd inuu diido, taasina waxay sababi lahayd in xilka madaxweynenimada laga qaado oo Addis Ababa laga soo magacaabo mid nacamle ah oo ka shaqeeya fulinta iyo qaadashada awaamiirta Ra’iisal Wasaaraha, isla markaana aan dan ka yeelanin rabitaanka Shacabka Soomaalida, lagana yaabo inuu noqdo mid liita caqli ahaan iyo aqoon ahaan qaadi karaya dariiqii Cabdi Iley.
Midda ugu dambaysa, waxa uu ahaa mid damiirkiisu diiday oo ah inuu is-casilo, taas oo iyaduna keeni karaysay in Addis Ababa laga keeno mid dhego fudud.
Marka la iskusoo duubo, ma jirin dariiq uu Madaxweyne Mustafe ku horjoogsan karayey, amaba ku diidi karayay in Xisbiga Dimuquraadiga Soomaaalidu ku biiro Xisbiga Barwaaqada, waxaana qayb ka ahayd in Soomaalidu aanay sida Tigre-ga lahayn awood lagaga waabto iyo shacab isku duuban oo meel u wada jeeda.
Caddeyn “xad-dhaaf” ah oo loo helay mooshinka xil ka qaadista Trump